Depioten’i Madagasikara | NewsMada
Par Taratra sur 29/05/2019
Havoakan’ny Ceni afaka 15 andro ny voka-pifidianana vonjimaika ho solombavambahoaka, hamarinin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC), mialoha ny hamoahany ny vokatra ofisialy. Na izany aza, manomboka hita soritra sahady ny ho mpandresy, satria fifidianana eny ifotony, isaky ny disitrika, ny ho solombavambahoaka, fa tsy faobe toy ny ho filoham-pirenena. Midika izany, fa efa fantapantatra ireo ho lany, hahazo seza eny Tsimbazaza, afa-tsy izay ho hitan’ny HCC, fa tsy nanara-dalàna, izay azo heverina fa ho vitsy ihany.
Niavaka ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy, ambany dia ambany, manodidina ny 30%. Azo raisina fa misy hafatra tian’ny olona tokony hifidy, saingy tsy nandeha, any amin’ny mpanao politika amin’ny ankapobeny eto Madagasikara izany. Toy ny tamin’ny fifidianana ho filoham-pirenena, izay ny mpanohana azy no nandany azy, miova ho filohan’ny Malagasy tsy vakivolo ny filoha lany, ary miasa ho an’ny Malagasy iray manontolo. Toraka izany koa ny fifidianana ho depiote, ho lasa solombavambahoakan’i Madagasikara izay lany eo, na ny mpanohana na ny antoko nanohana azy aza no nifidy azy tsirairay, fa tsy ho depioten’ny faritra nahalany azy. Izany hoe, hamolavola na handany ny lalàna hampiharina eto amin’ny firenena, sady hanara-maso ny asan’ny mpanatanteraka rahateo. Hitsinjo ny fampandrosoana ho an’ny Malagasy tsy ankanavaka, ny faritra tsirairay, tsy anavahana na olom-pirenena manohana na manohitra ny fanjakana.
Etsy ankilany, nahazo tsikera mavaivay ny fomba fanaon’ny solombavambahoaka farany teo, nandritra ny fitondran’ny filoha telo aloha, Rajaonarimampianina, toy ilay feo mandeha fa mety nisy ny sisi-bola (mallette). Tokony ho lesona ho an’ny depiote ho lany eo ireny, mba hiovany, fa miova ny tontolo sy ny fomba fanao, ankehitriny. Hanara-maso akaiky rahateo ny filoham-pirenena sy ny Malagasy tsy vakivolo, na ny nifidy na tsy nifidy azy ireo.